Isitudiyo esizimele eduze kwaseDowntown - I-Airbnb
Isitudiyo esizimele eduze kwaseDowntown
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Suzanna
U-Suzanna Ungumbungazi ovelele
Isitudiyo esizimele, igumbi lokugezela langasese, imizuzu emihlanu nje ukusuka eDowntown, Beaches, Wynwood, Design District, Midtown, DownTown naseBrickell.
Lesi situdiyo sifakwe zonke izinto ezibalulekile ezidingwa umhambi, sihlanzwe ngokujulile ukuze sinikeze indawo engenamagciwane. Mina nendodana yami siyakwazi ukwenza ndawonye ukuqinisekisa ukuthi sikhona ngokushesha ukuze sihlangabezane nezidingo zezivakashi zethu. Sikholelwa ngokuqinile ekuhlonipheni ubumfihlo bezivakashi zethu. Sinomoya wokungenisa izihambi futhi samukelekile
Lesi situdiyo sinomnyango ozimele wokungena, igumbi lokugezela langasese, ikhishi, ifriji, izindawo zokuphuma zikagesi eziyisithupha kanye ne-approx yayo. 285 sq. ft. enamathiselwe endaweni yethu yokuhlala eyinhloko kodwa ihlukaniswe yigumbi lokugcina elivikela umuzwa wokuba yimfihlo.
4.84 out of 5 stars from 309 reviews
4.84 · 309 okushiwo abanye
Idolobha laseLemon elingokomlando ligcwele ubuciko namasiko. Izungezwe inqwaba yezindawo ezinhle kakhulu nezikhungo ezinikeza izinketho eziningi ezahlukene ukuze noma ubani azijabulele.
Sikholelwa ekunikezeni izivakashi ubumfihlo obuningi nakuba sizotholakala ngangokunokwenzeka futhi singathintwa ngocingo, umbhalo noma i-imeyili. Sikhuthaza ukuxhumana!